Soo dejisan BS.Player 1.27.189 – Android – Vessoft
Soo dejisan BS.Player
BSPlayer – ciyaaryahan functional inuu u ciyaaro files warbaahinta. Software wuxuu taageeraa qaabab video badan oo ay ka mid yihiin divx, flv, MOV, mkv, mp4, avi iwm BSPlayer awood u waafajinta maqal ah, ku dar subtitles iyo ciyaaro video. Software ka kooban yahay tiro codecs dhisay-in si aad u daawato videos of qaabab kala duwan. BSPlayer sidoo kale waa u fiican u ciyaarista muusigga iyo ogolaanaya inaad la qabsato loo maqli karo ee kuwan raadkaygay isticmaalaya goolka barbaraha.
Taageerada tiro badan oo ah maqal iyo video qaabab
Kartida aad u la subtitles shaqeeyaan
Waxaa la dhisay-in ururinta codecs
BS.Player Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... WiFi Manager 3.5.4.2
English, Français, Español, Deutsch... Popcorn Time 2.7.6
English, Español, Português, Italiano... FrostWire 1.6.4